New York Bill Na-ezube Iji Kwụsị Oge Ngwuputa Bitcoin | Site na Linux
A New York ụgwọ na-ezube ịkwụsị nwa oge bitcoin mining
Ọchịchịrị | | GNU / Linux
Site na nwata, mmetụta ike nke bitcoin akwụsịbeghị na-atụle, ọ bụ ezie na isiokwu ahụ abụwo isiokwu nke akụkọ dị iche iche kemgbe ọtụtụ afọ na oge ụfọdụ jiri ike achọrọ maka nsị bitcoin na ike ike kwa afọ nke mba ụfọdụ, emebeghị ka gọọmentị rụọ ọrụ ndị doro anya.
N'echiche a, New York State na-ebute ụzọ nke ụdị a mgbe ị na-eweta ụgwọ iji kwụsịtụ nsị cryptocurrency n'ime afọ atọ na-esote iji nyochaa mmetụta ọ metụtara gburugburu ebe obibi n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Ma ọ bụ na cryptocurrencies nwetara ewu ewu ma mee ozi ọma n'oge nke mbụ nke 2021. Bitcoin, onye kacha mara amara ha, ruru oge dị elu karịa $ 58,000 kwa mkpụrụ ego na February.
A maara ego dijitalụ a inwe mmetụta dị ukwuu na mbara ala. Ngwuputa Bitcoin nwere ọnụ ahịa gburugburu ebe obibi dị egwu nke na ọtụtụ akụkọ na-egosi na Ngwuputa Bitcoin nwere otu akara ụkwụ carbon ka Argentina. N'ọdịnihu, ọ nwere ike iri nnukwu ike eletriki dịka ebe data dị na ụwa.
Iji hụ nke ọma, Senator Kevin Parker webatara Bill 6486 na Kọmitii Na-ahụ Maka Nchekwa Gburugburu Ebe Ọchịchị na New York State iji gbochie ọrụ nke ebe a na-egwupụta mkpuchi cryptocurrency ruo mgbe steeti nwere ike nyochaa mmetụta gburugburu ebe obibi ha.
Kpọmkwem, ụgwọ ahụ ga-ekwe ka steeti New York guzobe mmechi afọ atọ na arụmọrụ nke ụlọ ọrụ cryptocurrency. Nke a bụ mbido mbụ nke ụdị ya kemgbe ọbịbịa nke cryptocurrencies.
E mesịa steeti ga-eme nyocha ọmụmụ gburugburu ebe obibi zuru oke na mmetụta nke anwuru ikuku gas dị na etiti site na nsị, yana mmetụta ya na ogo mmiri, mma gburugburu ebe obibi, ikuku na anụ ọhịa.
Ma ọ bụ na bitcoin na-eto n'agbanyeghị akụkọ banyere akara ụkwụ carbon ya, ebe ọ dị nkenke ruo oge dị elu nke $ 64,000 tupu ndepụta Coinbase kpọmkwem, tupu ọ daa 36% na $ 47,000 gburugburu 10 ụbọchị mgbe e mesịrị.
A katọrọ Bitcoin mining ogologo oge n'ihi ike ya dị elu na mmetụta gburugburu ebe obibi, na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ nyocha, gụnyere ọmụmụ sitere na Mahadum Cambridge, egosila na nsị bitcoin gburugburu ụwa na-eri ike kwa afọ karịa ụfọdụ mba niile.
Na February, akụkọ ha mere atụmatụ na iwe ọkụ bitcoins "nke m" na - arụpụta akara carbon ka Argentina. N'April, nyocha ọhụrụ nke Dutch na-eme nchọpụta Alex de Vries, onye nchoputa nke Digiconomist, gosipụtara na ịrị elu nke ọnụahịa bitcoin na-edugakwa na ike ike dị elu. Ọ na-atụ aro na ike oriri nke bitcoin nwere ike ịdị nso na mkpokọta oriri nke ụlọ ọrụ data ụwa niile jikọtara ọnụ, ọ nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu karị maka gburugburu ebe obibi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụwa.
Ngwuputa Cryptocurrency na - achikota ụkọ mgbawa zuru ụwa ọnụ ọ na-eyi ọbụna nchekwa mba ụwa egwu. Nke a bụ nkwubi okwu Alex de Vries na edemede ya nke akpọrọ "Bitcoin Boom:
nke pụtara na mmụba nke ọnụahịa maka oriri nke ike site na ntanetị ", nke e bipụtara na magazin Joule. Dị ka Bill Gates, onye nwe otu nde mmadụ Charlie Munger na-eche na "bitcoin na-asọ oyi ma na-emegide ọdịmma nke mmepeanya anyị." N'echiche a, ọ na-ekpe ikpe na bitcoin dị njọ maka ụwa. O kwuru, sị, "Akpọrọ m ihe ịga nke ọma nke bitcoin asị na anaghị m akwado ego nke bara uru na ndị omekome."
Nkwupụta ahụ ga-esonyere ụbọchị ikwu okwu ọha mmadụ nke 120 ma ọ dịkarịa ala otu ige ntị ọha. Gwọ a na-abịa mgbe ụlọ ọrụ cryptocurrency na-arịwanye elu, uto nke Bitcoin na Ethereum mere, ọnụ ahịa ya na-eto n'ike n'ike kemgbe Eprel.
A na-atụ anya ka ụlọ ọrụ nne na nna osisi ahụ, Greenridge Generation Holdings, gaa n'ihu ọha site na njikọta na United States n'afọ a.
Mgbe anabatachara ya, ebe a na-egwupụta akụ dị ka ihe na-emerụ ahụ, ya bụ, ndị na-adọpụ uche steeti site na ebumnuche ọpụpụ ya nke edepụtara na Iwu Nduzi Ihu Igwe na Ọchịchị Obodo nke 2019, agaghị enweta ikike ndị dị mkpa iji rụọ ọrụ ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » A New York ụgwọ na-ezube ịkwụsị nwa oge bitcoin mining
Ahịa na Cointop: 2 GUI na CLI ngwa iji nyochaa Cryptocurrencies
Facebook weputara koodu ntinye nke Cinder nke Instagram na-eji